Nhau - Ndeipi nzira yepamusoro yekupfeka ngowani ye baseball
Zvemitambo uye Zvekuvaraidza Zvishongedzo
Slipper & nemasiraidhi
Beanie & Yakarukwa nguwani
Cotton kumeso masiki
Ndeipi nzira yepamusoro yekupfeka baseball ngowani
Dzimwe nguva, Kana iwe uchifunga kuti yako yekunze yekupfeka kutaridzika yakapusa, unogona kugadzirira baseball cap mune yakasarudzika mitambo maitiro. Ichave rubatsiro rwakakura musitayera yako. Izvo hazvizoda zvinhu zvakawandisa zvidiki kuti zvishongedze, uye iyo baseball cap inogona kuita yako sitimendi yakasarudzika & Handsome, asi chii chakanyanya kutaridzika neheti yebaseball?
Baseball cap + tsamba yakajeka juzi refu:
Iyo tsamba-kureba yakasununguka-inodzivirira gown zvakare iri yemitambo, uye yakakwana ne baseball cap. Zvipfeko zvakajairika hazvikonzeri kupokana neheti. Iko kusanganiswa kwemurwi masokisi uye shangu dzakajairika zvakare kwakanyatsonaka. Kupfeka magirazi ezuva kunotonyanya kunaka.
Baseball cap + T-shati + hudyu siketi:
Baseball cap uye hudyu masiketi anogona zvakare kumira ega. Yakasununguka yakasununguka solid color T-shati ine musiyano wemuvara pasuru siketi izere nehujaya ruvara, sanganisa uye mechi ne baseball cap,
Baseball cap + chipfeko + cardigan bhachi:
Iko kusanganiswa kwemapfekero uye juzi rekadhi zvine mutambo chaizvo, zvichipa vanhu manzwiro akasununguka uye nekukurumidza. Kubatanidzwa kweye baseball cap inowedzera mamwe masitayera.
Huguang East Road 89, Minhang Dunhu, Shanghai, China
Ndeipi nzira yakanakisa yekupfeka yakati sandara pamuromo